दिमागलाई कदमै तेज बनाउने यस्ता छन् घरेलु ७ जडिबुटी - Purbeli News
दिमागलाई कदमै तेज बनाउने यस्ता छन् घरेलु ७ जडिबुटी
प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक ०६, २०७३ समय: १४:१९:३०
दिमाग शरीरको एकदमै महत्वपूर्ण हिस्सा हो। दिमाग बिना शरीरका कुनै पनि अंगले काम गर्न सक्दैन। तर कहिले कहिँ मानिसहरुको मध्यपान, धुम्रपान, नराम्रो आदत, पोषक तत्वको कमि जस्ता कुराले गर्दा स्मरण शक्ति कमजोर हुन जान्छ । त्यसकारण स्मरण शक्ति बढाउनका लागि हामीले घरेलु ७ जडिबुटीहरुका बारेमा तपाईलाइ बताउन गईरहेका छौं । तिनीहरुको सहि तरिकाले प्रयोगमा ल्याउदा दिमाग तेज हुन सक्छ ।
यसको जरामा लट्टा परेको कपाल जस्तै तन्तु हुने भएकाले यसलाई जटामसी भनिएको हो । यो औषधिको रुपमा प्रयोग हुन्छ । यो स्मरण शक्ति बढाउनको लागि एकदमै राम्रो औषधि हो । एक चम्चा जटामसी एक कप दूध मा मिसाएर पिउदा दिमाग तेज हुन्छ ।
२. दालचीनी दालचीनीलाई खानमा गरम मसलाको मात्र नभएर यो औषधि पनि हो । दालचिनीले दिमागलाई तेज बनाउछ । राति सुत्ने समयमा एक चिम्टी दालचिनी पाउडर लाइ मह मा मिलाएर खादा मानसिक तनाब बात मुक्त मिल्छ । अनि दिमाग तेज हुन्छ।
बेसार दिमागलाई तेज बनाउने एक महत्वपुर्ण जडिबुटी हो । यो खानाको स्वाद र रंगमा प्रयोग गरिन्छ यसको नियमित प्रयोग ले भुल्ने समस्या बाट बच्न सकिन्छ ।
दिमागलाई तेज बनाउनको लागि जाईफल पनि अति उपयोगी जडिबुटी हो । यसको प्रयोगले भुल्ने समस्या बाट मुक्त मिल्छ।
बिशेषगरी तुलसी रुघाखोकीको अति राम्रोको रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ । यो धेरै जसो मानिसले चिनेजाने को जडिबुटी हो । यसको प्रयोगले मुटु र दिमागलाई राम्रो फाईदा गर्दछ ।
अदुवालाई खानामा स्‍वादका प्रयोग गरिन्छ, त्यसका सथसाथै यसलाई अनिद्रा, डिप्रेशन जस्ता रोगहरुको लागि औषधिका रुपमा प्रयोग गरिन्छ ।
७. कालो मरीच
कलोमरीचमा पेपरिन रसायन पाइने हुदा यसको प्रयोगले दिमागका कोसीकालाई आराम दिन्छ । यसको प्रयोगले डिप्रेशन तथा अन्य रोगबाट पनि मुक्ति पाउन मदत गर्दछ। दिमागलाई स्वस्थ राख्नको लागि कालोमरिच अति उपयोगी घरेलु जडिबुटी हो । बिगुल न्युजबाट